उषा भुतुक्कै भएर सुस्केरा काड्छिन् - Naughty Nepali
Home » Nepali Sex Stories » उषा भुतुक्कै भएर सुस्केरा काड्छिन्
उषा भुतुक्कै भएर सुस्केरा काड्छिन्
पोखरा जाने दिन आउँछ। मानिस र घरहरूको अत्यधिक चापले भासिएझैँ देखिने त्यो काठमाडौँ सहर छाडेर हरियाली पर्यटकीय स्थल पोखरा पुग्छन्। दिनभरि पोखराका विभिन्न पर्यटकीय स्थल घुमी साँझपख एउटा महङ्गो होटलमा रात बिताउन पुग्छन् उनीहरू। मिष्टर एन्ड मिसेज विजय भनेर होटल खातामा नाम लेखाई उनीहरू रुमतिर लाग्छन्। मिसेज विजय लेख्दा उषालाई एउटा अलग अनुभव हुन्छ। ऊ मनमनै खुसी हुन्छे। साँझको खाना लिइसकेपछि दुवै कोठामा पुग्छन्। दुवैले एकले अर्कालाई नियाल्छन्। के गर्ने, के नगर्ने, असमाञ्जस्यमा पर्छन्। परिस्थिति विचार गरी विजयले बत्ती अफ गर्छ। उषालाई अङ्गालोमा लिन्छ र ओठमा चुम्बन गर्दै सुस्तरी बोल्छ- ‘सुत न थकाई लागेको छैन -’ विजयले भन्दा उषा मौन हुन्छिन्। विजय आफ्ना लुगा फुकाली नाइट ड्रेस लगाउँछ। उषा बसिरहेकी हुन्छिन्। विजयले विस्तारै उषालाई बिछ्यौनामा पल्टाउँछ। दिउँसोकै ड्रेसमा उषा ओछ्यानमा सुत्छिन्। विजय उषाको नजिकै आएर पल्टन्छ। केही क्षण दुवै मौनरूपमा सुतिरहेका हुन्छन्।
बोल न उषा, के भयो – किन चुप लागेकी -’- विजय बोल्छ। ‘के कुरा गर्ने भन्नु न, तपाईं नै मेरो छेउमा हुनुहुन्छ, तपाईं भएपछि मलाई सबै पुगिसरी हुन्छ’- उषाले भोनिन्। ‘तिमी कति प्यारी छौ है, मलाई कति माया गर्र्छौ तिमी -’- ओठमा चुम्बन गरी आफ्नो हातले उषालाई सुस्तरी अङ्गाल्दै विजयले भन्यो। ‘तपाईं पनि त मलाई माया गर्नुहुन्छ नि। मलाई तपाईं जति प्यारो यो दुनियाँमा कोही लाग्दैन’- उषाले पनि विजयको चुम्बनको प्रत्युत्तर फर्काइन्।
अब विजय उषाको अझ नजिक टाँसिएर सुत्छ। आफ्नो हात उषाको वक्षमा लगेर स्थिर गर्छ। विस्तारै त्यहाँ चल्मलाउन थाल्छ। ऊ अब उषाको मुखभित्र आफ्नो मुखले के-के खोज्न थाल्छ। उषाको शरीरको न्यानो स्पर्शले विजयलाई उत्तेजित बनाउँदै लग्यो। दिउँसो लगाएको लुगामा सुतेकी उषाको टिसर्ट विस्तारै विजयले माथितिर सार्न थाल्छ। टिसर्ट माथि सारिसकेपछि ऊ आफ्नो हात ब्राको हुकमा लगेर चलमलाउन थाल्छ। उषा ठूलो श्वास फेर्दै हुन्छे। ब्राको हुक खोल्न अप्ठ्यारो भएपछि उषाले विजयलाई सघाउँछिन्। विजय आफ्नो कार्यमा सफल हुन्छ। अब ऊ आफ्ना हातहरू उषाको पुष्ट वक्षमा ल्याएर स्थिर गर्छ। एउटा सानो बच्चाले गुडियासँग खेलेझैँ विजय उषाका स्तनसँग खेल्न थाल्छ। उत्तेजनाले बेला-बेला उषा विजयको ओठ चुस्छिन्। त्यस्तै विजय पनि उसको ओठ चुस्न थाल्छ। विजय हातको औँलाले उषाको नाइटोको गहिराइ नाप्छ। जुन उषाको पेन्टको टाँकमा चल्मलाउँछ। तुरुन्तै आफ्नो इच्छामा सफलता पाएपछि उषाको पेन्ट तल सार्न थाल्छ। सो कार्य गर्दा विजयलाई उषाले सहयोग गर्छिन्। उषा पेन्ट फालेर विजयसँग लपक्क टाँसिन्छिन्। विजयले आफ्नो चोर औँला उषाको योनीमा पसाउँछ। यसबेला विजयको हातले उषाको योनीबाट तरल पदार्थ निस्किरहेको अनुभूति गर्छ। ऊ उषाको योनी खेलाउँछ। कुनै परस्त्रीको प्रथम पटक सामीप्यता पाएको विजय उषाको हरेक अङ्गहरूलाई चाख लिई लिई निरीक्षण गरिरहन्छ। उषा बेला-बेलामा उत्तेजनाले विजयको ओठ टोक्दै हुन्छिन्। यसबेला विजयको काम नायक चाखका साथ उषाको महत्वपूर्ण अति गोप्य त्यही अङ्गसँग जोडिएको हुन्छ। उषा पनि उत्तेजित हुन्छिन्। केही बेर नबोलीकन विजयले काम सुरु गर्ला भनेर आशा गर्छिन्। तर विजयचाहिँ हातले खेल्नमै व्यस्त भएपछि उनी बोल्छिन्- ‘के गरिराख्नुभएको राजा, छिटो न आफ्नो काम गर्नुस्, कति मलाई तड्पाइरहनुहुन्छ -’ ‘मेरी प्यारी रानी, म तिमी तड्पेको सुन्न सक्दिन, त्यसैले अब आफ्नो काम सुरु गर्छु विजयले कुरा स्वीकार्छ। उषाको हात समातेर आफ्नो लिङ्गमा ल्याउँछ। आगोबाट हात झिकेझैँ गरी उषा फुत्त हात झिक्छे। विजय उषामाथि उक्लन्छ। उषा विजयलाई सजिलो पारिदिन्छे। विजयले फटाफट आफ्नो काम सुरु गर्छ। लिङ्ग प्रवेश हुनासाथ विजयलाई खूब आनन्द आउँछ। उषा भने पीडाले चिच्याउन थाल्छिन्- नाइँ-नाइँ, मैले सकिन छिटो बाहिर निकाल्नुस्…। विजयललाई उषाको पीडा सैह्य हुँदैन, त्यसैले विजयले आफ्नो कामनायक बाहिर निकाल्छ। ‘के भयो तिमीलाई – किन डराएकी, भन त -’ विजयले उषाको गाला मुसार्दै सोध्यो। ‘तपाईंलाई त मज्जा भयो होला नि, अर्कालाई के भइराखेको छ, ख्याल गर्नु छैन -’ लाडे बोली बनाएर उषाले भनी।
‘भन न त मैले के गर्नुपर्छ – म तिमीलाई पीडा भएको सहन सक्दिन क्या !’ विजय बोल्छ। ‘कस्तो साह्रो गरी कुहिनाले थिचेको – यत्रो ठूलो शरीर थामेकी छु। त्यहीमाथि कुहिनाले थिच्दा अर्कालाई दुख्दैन -’- उषाले विजयलाई वास्तविकता बताउँछिन्। विजय त्यो गल्ती दोहोर्याउँदैन। बडो सतर्कका साथ पहिले झैँ गरी विजयले आफ्नो काम सुरु गर्छ। आफ्नो नायकलाई लक्ष्यमा पुर्याइसकेपछि विजय तल-माथि गर्दै मच्चिन थाल्छ। हातले उनको सुकोमल स्तन मुसारिरहेको हुन्छ। त्यस्तै चुम्बन पनि गरिरहेको हुन्छ। दुवै आनन्दले सुत्छन् र निदाउँछन्।
राति जब उषा ब्युँझिन्छिन्, उनलाई थाहा हुन्छ आफ्नो योनीक्षेत्रमा केही सल्बलाइरहेको छ, जसको उनलाई हल्का आनन्द पनि आइरहेको छ। उनी हात लम्काएर बेड स्वीच अन गर्छिन्। उज्यालोमा देख्छिन् त विजय उनका दुवै तिघ्रा फारेर बीचमा बसेर उनको गुप्तक्षेत्रमा जीब्रो पो चलाइरहेको ! बत्ती बलेपछि विजय उषालाई हेरेर थोरै हाँस्छ। उषा पनि मुस्कुराउँछे। विजय पुनः आफ्नो कार्य सुरु गर्छ। ऊ योनीको डिलमा आफ्नो जिब्रो चलाउँछ। उषाको बच्चाको जस्तो कलिलो योनीमा जिब्रो चलाउन उसलाई खूब मजा आउँछ। उषा पनि आनन्दले विजयको टाउको सुम्सुम्याउँछिन्। केही समयपश्चात् विजय उषाका स्तन प्रेमपूर्वक मुसार्दै आफ्नो जिब्रो लिङ्गझैँ योनीमा भित्र-बाहिर गराउँछ। उषा भुतुक्कै भएर सुस्केरा काड्छिन्। उनी भन्छिन्- ‘विजय, लौन, मलाई त खपिनसक्नु भयो, अब केही गर्नुस्।’ उषाले यसो भन्नासाथ विजय फेरि उषामाथि चढ्छ। उसले यसो गर्दा उषाको आँखाअगाडि विजयको विशाल लिङ्ग देखापर्छ भने विजयचाहिँ उषाको योनीतिर आँखा पुर्याउँछ। उषा विजयको लिङ्ग हातमा लिन्छिन् र प्रेमपूर्वक मुसार्दै चुस्न थाल्छिन्। उता, विजय दुवै हातले उषाको योनीमा चलाउन थाल्छ। यो क्रियाले दुवैलाई चरम आनन्द प्राप्त हुन्छ। केही समयपछि दुवै स्खलनको अवस्थामा पुग्छन्। विजय बोल्छ- ‘उषा केही छिन रोक त।’ ‘किन राजा -’ विजयको विशाल लिङ्ग मुखबाट निकाल्नै उषा बोल्छिन्। ‘म बग्न लागेँ, त्यसैले के।’ विजयले जवाफ दिन्छ।
‘मलाई पनि त्यस्तै भइरहेछ। यही मौकामा काम सिध्याउ न हुँदैन -’ विजय- ‘यति छिट्टै किन -’ उषा- ‘जागेपछि फेरि गर्ने नि, के आपत छ र ! हामी दुई छँदै छौँ क्यारे।’
‘त्यसो भए गरेर नै सिध्याउने त -’ यसो भन्दै विजय फर्किन्छ र उषाको योनीमार्गमा आफ्नो विशाल लिङ्ग लगेर राख्छ। विस्तारै दबाब दिन्छ। लिङ्ग योनीमा पस्छ। उषाका स्तन सुम्सुम्याउँछ। विस्तारै प्रहार गर्न थाल्छ। यसरी लयात्मक तरिकाले प्रहार गरेको उषालाई खुब रमाइलो लाग्छ। विजय जोडले प्रहार गर्न थाल्छ। उषा उसलाई उत्साहित गर्दै बोल्छिन्- ‘हो, अझ जोडले प्रहार गर्नु, हो-हो, यसरी नै।’ उषा यसो भन्दै विजयलाई हौस्याउँछिन्। दुवै उत्तेजनाले कराउँछन्। र, केही थप घात-प्रतिघातपछि दुवै शिथिल हुन्छन्। त्यसपछि यी दुई प्रेमी जोडी आनन्दपूर्वक टाँसिएर सुत्छन् र निदाउँछन्।
lado puti in hotel, nepali lado puti katha, nepali puti, nepali puti chikeko, nepali real sex stories, nepali sex stories, nepali sex story, pokhara ma usha sanga, usha ko puti, usha le mero lado chusi, उषा भुतुक्कै भएर सुस्केरा काड्छिन्
dai nabhako bela ma bhauju lai chikeko
bhaujuko puti ma ragaddye